February 2016 - KwaZulu-Natal Legislature
February 23, 2016 admin user
INKULUMO YESILO EMCIMBINI WOKUVULA ISISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATAL NGOMHLA ZINGAMA-23 KUNHLOLANJA 2016
Ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nanhlanu le Ndlu ilahlekelwe ngamalungu ayo amabili abesemkhatshubomvu. La malungu bekunguMhlonishwa uMtholephi Mthimkhulu obemele iqembu elibusayo kanye noMhlonishwa uLionel Mtshali obemele iqembu eliphikisayo nowayenguNdunankulu KwaZulu-Natal. Kangingabazi ukuthi ukuwa kwala malungu ahloniphekileyo akuphazamisanga nje kuphela ukusebenza kwale Ndlu noma amaqembu abo, kepha kwaba njalo nasemindeni yawo. Yikho namuhla egameni loBukhosi kanye nabaKwaZulu-Natal ngidlulisa ukubonga emalungwini emindeni yabo ngokusiboleka bona isikhashana. Ubukhona babo kule Ndlu bekuyisithako esimqoka ekuqiniseni izinhlaka zokuphatha kanjalo nokubusa esiFundazweni sethu. Siyabonga.
Ngiselapho ngiyathemba Somlomo iHhovisi lakho ngeke lisenzele phansi ngokuthi lingayiqophi imisebenzi yala mulungu engikhuluma ngawo kanye nalawo asalandulela leli kanye nalawo asathatha umhlalaphansi noma aya kweminye imikhakha. Kungayishwa ukuthi izizukulwane ezizayo zingawazi umlando namagalelo afana namalungu ale Ndlu angasekho afana noMhlonishwa uDumisani Makhaye, uMntwana uGideon Zulu, inkosi uHulumende Gumede, inkosi Khayalethu Mathaba, inkosi uMhlabunzima Hlengwa, uMhlonishwa uJoseph Dududu Mkhwanazi, uMhlonishwa u-Amichand Rajbansi kanye noMhlonishwa uMfundisi uCelani Mthethwa.
Kanti kulaba abasaphila sekungawukwenzela phansi umphakathi waKwaZulu-Natal uma le Ndlu ingagcini nje ngokuqopha amagalelo amalungu ayo afana noMhlonishwa uRoger Burrows , inkosi uBonga Mdletshe namanye amaningi edlula lapha enza umnikelo. Lokhu engikushoyo kumqoka ngoba ikhona ingozi uma izakhiwo ezifana nale Ndlu zehluleka ukuqopha umlando omqoka osuka ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nane kuze kube yimanje. Uma lokho kungenzeka kungasho ukuthi izizukulwane ezizayo zakwaZulu-Natal zingalahlekelwa yiminyaka engamashumi amabili nanye yokusebenza kweSishayamthetho sazo.
Ezweni elinjengeNingizimu Afrika kanye nesiFundazwe saKwaZulu-Natal sikhulu isidingo sokuqopha amagalelo kanye nokusebenzisa amakhono alabo ababeyibambe ngaphambilini. Ekuqopheni amagalelo kanye nezigameko isizukulwane esikhona sizokwazi ukuthi sivela esimweni esibucayi kanjani nokuyosenza sigweme lokho okwaba ngamaphutha endulo. Umuntu ongafunda ngobuhlungu udlame lwezombangazwe olwaluletha KwaZulu-Natal ngeke abe budedengu ekuphimiseni amagama angasiphindisela kulelo ndulo elibuhlungu. Kanjalo nomuntu ongafunda ngendima abaholi bangaleso sikhathi abayihlakulayo ekuletheni ukuthula uzokwazi naye ukuqinisekisa ukuthi leyo mizamo akayifeli amathe.
Lokhu ngikusho ngenhlonipho ngoba sengike ngizwe futhi ngifunde nasemaphephandabeni ngezinkulumo zabantu abanye okungabaholi bese ngifikelwa wukukhathazeka ukubona ukuthi kanti umlamdo esiphuma kuwo kawaziwa kanjani.
Somlomo nani malungu aHloniphekileyo
Kungenxa yalokhu namuhla nginigqugquzela ukuthi qophani amagalelo enu, futhi nisebenzise labo abanesipiliyoni abangasekho kule Ndlu ukuze ukusebenza kwenu kube okusezingeni. Lo mlayezo ngiyawedlulisa nakuwe Ndunankulu uMchunu ukuthi nakuHulumeni wakho ubheke izisebenzi ezathatha umhlalaphansi ubuke ukuthi angeke yini zilekelele ekucijeni lezo ezikhona manje. Baningi othisha, abahlengikazi ngisho nalabo ababesebenza emahhovisi njengabaphathi nomabhalane abangenza umnikelo omangalisayo ekuqiniseni ukusebenza kukaHulumeni wakho. Ngisho njalo nasezinhlankeni zoBukhosi ngoba usukhona umkhuba wokuthi uma sekubekwa abantu abasha bese kuthiwa abadala kabahambe bonke. Kunjalo nakulaba abasethulela izindaba emsakazweni nasemaphephandabeni ethu uyabona ukuthi ifeshini sekuyiyo le yokukhomba indlela okudala kuhlotshwe ngokusha.
Iqiniso lithi alikho izwe lezingane zodwa, lingekho futhi nezwe labantu abadala bodwa. Kepha elikhona ngelabadala nabancane, abesifazane nabesilisa abasebenza ngokubambisana.
Emasontweni nje edlule isifundazwe sethu silahlekelwa yingcithabuchopho uSolwazi uHebert Vialakazi. Lesi sifundiswa sakwaNongoma ebesidume umhlaba wonke, njengoyise uSolwazi u-Absolom Vilakazi senze omkhulu umnikelo kwezemfudo. Ezweni lapho labo ababenethuba lokufunda bagogode beqhelelana nemiphakathi kanye namasiko abo, uSolwazi uVilakazi usebenzise ulwazi lwakhe njengodondolo lokucijisa umphakathi avela kuwo ngalokho okungaba yizixazululo empilweni. Ngalo mzuzu ngikhalisana nayo yonke imindeni yaKwaZulu-Natal
esiyaziyo nesingayaziyo elahlekelwe yizihlobo zayo kusuke ngesikhathi ngenza inkulumo yami kule Ndlu ngonyaka owedlule.
Enkulumweni yami engiyenze emsebenzini wokugubha iminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa yeMpi yaseSandlwana ngomhla wamashumi amabili nantathu kuMasingana 2015 ngikhulume ngobumqoka bomndeni kanye nokubuyisana. Lapha inkulumo ibibheke kakhulu kuZulu kulo nyaka ozobungaza iminyaka engamakhulu amabili uBukhosi bawo bahleleka ngendlela okuyiyo namuhla. Kulo nyaka uZulu uyobe ubungaza umsebenzi weLembe wokuqeda izizwe wenze isizwe, wokuqeda izinhlanga lenza uHlanga. Njengoba ngakubalula eSandlwana, unyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesithupha ungunyaka wokuthi lowo mndeni omkhulukazi kaZulu ubuyisane kuyo yonke imikhakha yempilo. Ngiyakholwa ukuthi eSandlwana ngakhuluma nalokho okulingene uZulu. Kepha namuhla ngizokhuluma nani njengomndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika.
Kunoma yimuphi umdeni noma isizukulwane siyafika isikhathi lapho amalungu aloyo mdeni kumele abeke phansi konke lokho okungathatheka njengezidingo zalelo lungu ngalodwana kepha kubhekwe izidingo zomndeni wonke. Lokhu kusuke kwenziwa ngoba wonke umuntu ekuqonda ukuthi ukuphumelela komndeni, umphakathi noma isizwe akuncikile nje kuphela kumuntu oyedwa kepha kuncike ekubambisaneni kwamalungu onke omndeni. Ekubambisaneni kwawo akumele aze avumelane ngakho konke, kepha okumqoka ukuvumelana ngesidingo sokuthi isakhiwo esingumndeni singashabalali.
Namuhla ngikhuluma nani ngazi kahle kamhlophe ukuthi akukuningi enivumelana ngakho yikho niyizinhlangano ezehlukene nje. Kepha sengikushilo lokho ngiyazi ukuthi nonke niyakuqonda ukuthi umsebenzi wenu nonke wukuqinisekisa ukuthi umndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika awushabalali futhi kawubhubhi wona nezimiso zawo. Umndeni engikhuluma ngawo yilowo ngonyaka we-1994 wathatha isinqumo sokubuyisana nokwakha kabusha. Wathatha isinqumo sokufunda emaphutheni edlule, wamukela ukuthi indulo lethu sonke libe mazombe zombe. Ngaleso sikhathi eminyakeni engamashumi amabili edlule wonke amalungu alo mndeni amukela ukuthi indlela entsha nebhuloho esiliwelayo kuyophumelela manxa kunobulungiswa kwezomnotho, umthetho kanye nasekuhlinzekelweni kwawo wonke amalungu omndeni.
Ngesikhathi evota amalungu omndeni waKwaZulu-Natal nowaseNingizimu Afrika anika igunya abathize emndenini okuyini nezinhlangano zenu ukuba bazobamela lapho kuhlaziywa imithetho ezoqinisekisa ukuthi isakhiwo salo mndeni kasishabalali noma sibhubhe. Kepha okwaba mqoka kakhulu kwaba wukwamukela kwamalungu alo mndeni ukuthi yize esesifundazweni nasezweni elilodwa kuningi ahluka ngakho kusuka kunkolosiko, amahlelo ezenkolo kanye nangamaqembu epolitiki nokuyinto eyenza lo mndeni wethu uhlobe. Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili kukhona okuhle okungabikwa ngalo mndeni ngoba kuningi okwenzekile okube yizinguquko eziwuhlukanisile nendlulo lawo. Okuqaphekelayo lapha wukuthi lokho okuhle esikubonayo nesingakukhomba kwenzeka njalo uma amalungu esebenzisana.
Sengikushilo konke lokhu, njengobaba ngabe angikhulumi iqiniso uma ngingasho ukuthi phezu kwezinto ezinhle kukhona okungahambi kahle ngomndeni wethu. Phezulu eqhulwini wukuswelakala kwabaholi kuzo zonke izinhlanga nakuzo zonke izinhlangano abazokwazi ukuba ngaphezu kwesidingo seqembu noma sohlanga oluthile bakhombe lokho okuyizixazululo ezivunguvungwini esibhekene nazo njengesizwe. Ngokudumala izakhamuzi zibuka abaholi behluleka wukubekezelelana, ukwamukelana, ukuxoxa kanye nokuqhamuka nombono owodwa. Okwenza kube novalo wukuthi uma ukubekezelelana nokwamukelana emalungeni omndeni asebuholini ngubani oyokhuza uma leso sihlava sesehlela kumalungu omndeni aholwayo na ?
Ngabe angikhulumi iqiniso uma ngingaphawuli ngezinga eliphezulu lokubhekana ngeziqu zamehlo komphakathi kanye namaphoyisa asuke ezinikele ukuba abe ngabavikeli bomndeni wonke. Lokhu kuphikisana nezinqumo ezathwayo mhla siwela ibhuloho sisuka endulweni lethu lobandlulo siza kulokho esikusho lapha kwavunyelwana ukuthi umbutho wamaphoyisa owakhiwayo usungowokuvikela izakhamizi. Impela okwenzakalayo kukhomba ukugula okuthile.
Okunye ukugula okukhona kukwezemfundo lapho wonke umthwalo wokukhulisa amalungu amancane omndeni asezikoleni sesiwashiyela ezisebenzini ezingothisha kuthi abazali nomphakathi babe kude le kepha babe mandla ukuphawula ngemiphumela. Kukhona futhi ukugula nakuzo izisebenzi uma sezizogxila kuphela kulokho okuthinta zona bese zikhohlwa okudingwa yisizwe sonke. Imiphumela yaKwaZulu-Natal kamatikuletsheni kumele isikhathaze sonke ngokulinganayo ngoba ekugcineni izingane lezi ngezethu sonke. Lesi bekungesisona isikhathi
sokubeka izaba kepha ngesokuzibuza ukuthi sonke njengamalungu omndeni singenzani ukulekelela imfundo yezingane zethu. Isifo esikhumuza umndeni wethu ngamandla wukuswelakala kwemisebenzi ikakhulukazi entsheni yethu. Lesi yisimo okungathi uma singanqadwa sigcine sesidale omkhulu umonakalo. Inkulumo ethi: ‘isisu esilambile asazi mthetho’ ingase ibe yiqiniso ngoba ngaphansi kwesimo sokungabibikho kwemisebenzi sibona abantu, abadala nabancane benza izinto ezingamahlazo nezinyantisa igazi. Yize uHulumeni ezama ukulungisa lesi simo ipolitiki yezomnotho emhlabeni jikelele njengoba yenza kwamanye amazwe ifaka izwe lethu ngaphansi kwengcindezi. Khona manjalo njengamalungu omndeni waseNingizimu Afrika kumele silivume iqiniso lokuthi abanye abantu, abadala nabancane kabaqasheki ngenxa yokuswelakala kwamakhono. Uma sikuvuma lokho umbuzo uthi yini esingayenza njengomndeni ukubhekana nalesi simo.
Iningi lezinkinga esinazo njengomndeni waseNingizimu Afrika zingenxa yendulo lethu elabe linenqubo yobandlululo, lapho ibala, isiko kanye nendawo umuntu azalelwe kuyo yabe ithathwa njengesono. Njengomndeni sizamile kule minyaka ukulwa nalokho kepha esikuzwa nesikubona kwenzeka kuveza iqiniso elibuhlungu lokuthi akuwona wonke amalungu omndeni wethu akwazile ukuwela nathi, esuke endulweni elibi lobandlululo.
Njengomzali kubuhlungu kuyankenketha ukubona nokuzwa amalungu omndeni wethu ehlaselana, egxibhana esebenzisa ubandlululo njengesikhali sokuphebeza labo ongabafuni kanye nokuchaza lokho okubaphatha kabi. Akwehli kahle ukubona amalungu ezinhlanga ezahlukene
akha umndeni waseNingizimu Afrika ebuyela ezinkambini zawo zasendulo zobandlulo njalo uma kukhona okungahambi kahle. Iqiniso okumele sonke silamukele ngelokuthi kawukho umndeni ongathuthuka uma ungenayo inkonzo yokuxolela nokwedlulisa.
Eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili izwe lethu lahlelwa kabusha ngibona sesifikile isikhathi sokuthi izinhlanga ezehlukene kuleli zedlule ekubekezelaneni kepha ziye ekwamukelaneni. INingizimu Afrika ichithe isikhathi eside yenza lokho okulukhuni nokuthatha isikhathi okuwukubekezelelana. Ngokwenza njalo siyeke ukwenza okulula nokusheshayo okuwukwamukelana. Empeleni asikho isidingo sokuthi owomdabu waseNdiya abekezele ukuthi kukhona amaZulu kepha kumele akwamukele ukuthi lokho njengeqiniso. Asikho isidingo sokuthi amaKhrestu abekezele ubukhona kwabe nkolo yobuHindu noma yobuNazaretha kunalokho kumele lokho akwamukele njengeqiniso. Labo abathi bamele amalungelo abantu abayeke ukubekezela ukuthi kukhona iMikhosi kaZulu efana noMkhosi woMhlanga kunalokho abakwamukele lokho njengeqiniso ngoba izintombi zoMhlanga zisazowuletha uMhlanga eNyokeni nakulo nyaka nakweminye ezayo. Asikho isidingo sokuthi kube khona ababekezela ukuthi kukhona isizwe samaBhunu KwaZulu-Natal kunalokho wonke umuntu kumele lokho kumele akwamukele njengeqiniso lomlando wethu. Kanjalo namaNgisi kumele angabekezelelwa kepha amukelwe. Lokhu okungenhla kumqoka ngoba sekukhona abantu lapha emndenini waseNingizimu Afrika asebecabanga ukuthi yibo bodwa abanamalungelo okusola abanye nokubehlulela. Asebekhuluma sengathi umthethosisekelo waseNingizimu Afrika wabe wakhelwe bona. Laba ngamaqhude ukuzibeka, asezwethese iziqu zokuba “ngamaphoyisa” omthethosisekelo. Inqaba kabasalindi
ngisho iNkantolo YoMthethosisekelo ukuba iphawule ngodaba, kunalokho yibo asebesho kuqala ukuthi ilungelo lokulandela amasiko athize noma inkolo ethize kakukho emthethweni. Lama lungu omndeni wethu asenkingeni ayadinga ukuba elulekwe futhi afundiswe yize ngazi ukuthi asathatha isinqumo esilukhuni sokuthi wona azi konke ngakho akekho ongawasola.
Njengoba ngishilo ekuqaleni kwenkulumo yami ukuthi njengomndeni sisenkingeni, umbuzo uthi yini okumele siyenze ukuphuma kule nkinga. Ngiyakuqonda ukuthi ezinye zezinkinga ezisikhungethe ziyothatha isikhathi ukuba zixazululeke kepha ngakolunye uhlangothi ngiyakholwa ukuthi ezinye, futhi okuliningi lazo, zidinga thina njengomndeni sithathe isinqumo. Isinyathelo sokuqala okumele sithathwe yiNingizimu Afrika wukuvuma ukuthi kukhona inkinga. Lokhu kumqoka ngoba kukhona abantu abamandla ekukhombeni ukuthi umnotho wezwe lethu ushona phansi okuyinto eliqiniso kepha bese bengazwakali uma sekuvela ukuthi kukhona ubandlululo lokucaswa kanye nolwezomnotho kuleli. Lokhu kudala isithombe esithi kukhona abafuna kukhulume into ethandwa yibo ngesikhathi esithandwa yibo, ngoba lokho kusuke kumqoka kubo.
Njengengxenye yokuphosa itshe esivivaneni ekutholeni isixazululo ezinkingeni ezisikhungethe, njengoBukhosi sizoqhuba nemikhankaso eminhlanu kulo nyaka wezimali. Umkhankaso wokuqala uqondene nemfundo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Udaba losuzi olubhekene nabafundi kanye nothisha abahlala ezindaweni ezingamakhaya luyaziwa kusuka odabeni lwegqalasizinda, ukunganeli kwesibalo sothisha bezifundo ezithize kanye
nokuswelakala kwemifundaze. Emuva kokubonisana neBhodi leNgonyama Trust ngivule umfundaze ozolekelela izingane ezivela ezindaweni ezingaphansi kweNgonyama Trust okuyizindawo eziholwa ngamakhosi ezizwe. Njengoba sengisivulile lesi sikhwama ngizoxhumana nabo bonke abahweba emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust okubalwa abezimayini, abezinxanxathela yezitolo kanye nezinkampani ezinkulu zamaselula ezinemibhoshongo ezindaweni zamakhosi ukuthi bonke baxhase lo mfundaze. Ngokwenza njalo osomabhizini nosozimayini bazobe beqeda isithombe esibi sokuthi okwabo wukwenza inzuzo nje bengenendaba nabanikazi bomhlaba.
Umkhankaso wesibili uzobe uqwashisa ngobugebengu nonya olubhekiswe kulabo abanofuzo osekuvele ukuthi sekukhona abagila imikhuba ngenxa yemfundisoze ngabo. Ngisebenzisa igama lofuzo ngoba ngicabanga ukuthi amagama akhona ehlisa isithunzi, ayihlamba futhi aveza ukungaqondi ngalamalungu omndeni wethu. Liyinhlamba igama elithi umuntu “uyisishawa” noma “uyinkawu”, yikho ngithi igama elihloniphekileyo wufuzo ngoba kithi sonke sinayo imbewu engakhiqiza ingane noma abantu abanofuzo ngakho lokhu akungabukwa njengesono, kepha akubukwe njengemvelo uNkulunkulu ayidalileyo futhi asikwamukele. Lo mkhankaso ngizowuqhuba ngezintombi zoMhlanga kulo lonke leli likaMthaniya nangaphandle kwemingcele. Uzofinyelela ezikoleni, ezindaweni zokukhonza, ezinkundleni zezemindlalo nasemicimbini kaHulumeni. Lapha ngimema noHulumeni waKwaZulu-Natal ukuba ubambisane nami kanjalo namaqembu ezombusazwe angaphakathi nangaphandle kweSishayamthetho.
Kanti umkhankaso wesithathu uzobe ulekele ngakwezolimo. Njengomlimi ngicabanga ukuthi ngiyiqonda kahle inkinga esibhekene nayo ikakhulukazi uma kufika ekutholakaleni kokudla okwanele. Kungathi yizolo lapho ngabe ngineminyaka emine nje vo ngibekwe eSihlalweni lapho kwabanjwa khona iWorld Food Confrence ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nane. Lokhu kwabe kuyimpendulo esimweni esibucayi esabe sikhona emhlabeni jikelele lapho abantu ababalelwa engxenyeni yesigidi bafa khona kulandela ukuswelakala kokudla ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nambili. Nakwesethu isikhathi isikhona imibiko esikhomba lapho nokuyimibiko elekelelwa yisomiso esihlasele izingxenye ezithize ze-Afrika okubalwa nezwe lethu. Kungenxa yalokhu nokunye lapho ngizohlanganisa amakhanda nabalimi abamhlophe, abamnyama, amakhosi ezizwe kanye noMnyango Wezolimo neNtuthuko YaseMakhaya ngenhloso yokubona lapho kungabanjiswana khona. Ngokwenza lokhu angisho ukuthi uHulumeni wesifunda noma omasipala kabenzi kahle.
Empeleni imisebenzi yalezi zinhlaka zombili ibonakele kakhulu ngonyaka owedlule lapho isimo samanzi besisesimweni senhlekelele kwezinye izindawo. Engikwenzayo wukufaka umfutho kuleyo mizamo. Kulo mkhankaso ngifisa kubekhona nalabo asebathatha umhlalaphansi abebeyizisebenzi eMnyangweni Wezolimo ngaphansi kukaHulumeni waKwaZulu ngoba angingabazi ukuthi kukhona ulwazi abangasichushisa ngalo ngoba phela isomiso lesi kasiqali ngalo Hulumeni. Isibonelo nje kwakukhona imigojana lapho kwabe kudonswa khona amanzi, oginxi, uma kunenkinga yesomiso okungathi uma kuba nolwazi olwanele ukuthi akuphi akwazi ukulungiswa
ngoba iqiniso lithi alikho idamu elingakhiwa ngezinyanga eziyisithupha bengekho futhi nabantu abangalinda ukwakhiwa kwedamu ekubeni izinkomo zabo zifa namuhla.
Umkhankaso wesine ubhekene nokuthuthukiswa kolwazi emakhosini ezizwe kanye nezinhlaka zobukhosi. Emhlanganweni engibe nawo namakhosi lapho besikhuluma ngokuxhashazwa kwemiphakathi yasemakhaya yizimayini kanye nezinkontileka ezakha izindlu nemigwaqo emakhaya, kube khona isidingo esimqoka esivelile. Lesi bekuyisidingo sokuba amakhosi ezizwe nezinhlaka zobukhosi bacije ngolwazi lokuphatha izindawo abakuzo. Lokhu kumqoka ngoba kuyatholakala ukuthi abanye kwezinye izizwe amakhosi agcina esengene ogibeni lamahumusha asayinisa imigunyathi eqonde ukuqola ingcebo etholakala emhlabeni. Lo mkhankaso uzokwazisa kabanzi ngemithetho ephathelene nokuphathwa komhlaba, ukwenza ibhizinisi ngomhlaba noma indawo leyo ubukhosi obukhona.
Kanti umkhankaso wesihlanu ungukuqhubeka kwalokho engakuqala ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nambili ngaphansi kohlelo iKwaZulu-Natal Public Peace Process. Mhlawumbe ngiselapho ake ngiphinde ngiwuveze umongo walo mkhankaso. IKwaZulu –Natal Public Peace Process iyabona ukuthi, okokuqala, ukuthula akusiyo into eyisigubhukane kodwa kuyasetshenzelwa, akuhlanganise lutho nohlaka lobudlelwano bomphakathi kanye nemicimbi exhaswayo ehlanganisa imiphakathi. Kamuva, sibone imibhiyozo nohulumeni yonke indawo bethunaza ukwakhiwa kokuthula kuba yilokho kokusayina izivumelwano zoxolo. Kuyadabukisa ukuthi umlando wakamuva usukhombisile ukuthi izizinda zokuthula azenzi ukuba kube nokuthula phakathi kwezakhamuzi.
Okwesibili, okwenziwa yinkosi, okunliqiniso, kuyakhombisa ukuthi ekunxabaneni nasekuletheni ukuthula umuntu uyathinteka ngandlela thizeni. Ukuxabana akusikhona nje ukungqubuzana kweziziznda futhi akusilona iqiniso ukuthi yilabo abaxabene kuphela okufanele basombulule inking. Okokugcina, okwethulwa iKwaZulu-Natal Public Peace Process okubukeka kusemqoka ukuthi ukubulalana akuthinti amaqembu ezombusazwe axabene kuphela kodwa kuthikameza nosinga lwenhlalo yomphakathi, kanye nobunjalo besifundazwe iKwa-Zulu Natal, kuthintibeze utshalomali. Lo msebenzi uqinisekisa ukuthi enye yezinto ezisemqoka ekwakhiweni kabusha ezenhlalo, ezombusazwe nezomnotho ngamandla kanye nokuzimisela kwemiphakathi okuba kuxoxiswane ngenhloso yokuthola izixazululo eziphusile nezikade ezinkingeni ezikhona. Umqondo ovulela bonke ubuhle lapha ukuxoxisana.
Ngaphansi kweKwaZulu-Natal Public Peace Process ngesonto lokuqala likaNdasa ngizobiza isigcawu lapho zonke izinhlangothi ngizofisa zibike ngalokho esezikwenzile uma kufika ezinhlelweni zokubuyisana nokuthula KwaZulu-Natal. Njengoba ngishilo enkulumweni yami, akuwona wona amaqembu epolitiki noma uHulumeni okumele bazihluphe noma babe sekhaleni lokukhuluma ngezinto ezithinta ukuthula nokubuyisaan. Kwesinye isikhathi uHulumeni wona qobo lawo kanye namaqembu kumele bazochaza esigcawini ukuthi benzeni. Kulesi sigcawu, Ndunankulu, ngiyafisa ukuba ngizokwethulelwa umbiko ngamaKhomishini akho amabili engicabanga ukuthi abe enza umsebenzi omqoka, elokuqala labe liholwa nguSolwazi uPaulos Zulu iSocial Cohesion Comission. Elesibili yilelo ebeliholwa nguMahluleli uNavi Pillay ngeziqubu zodlame phakathi kwabokufika kanye nezakhamuzi zakuleli ngonyaka owedlule. Abanye
abazomenywa ukuba bazokwenza izethulo kulesi sigcawu ngabeHuman Rights Comission esifisa ukuzwa ukuthi kambe izincomo zabo zonyaka wezinkulungwane ezimbili nesishiyagalombili mayelana nodlame olwabe lubhekiswe kwabokufika zingasetshenzwa kanjani lapha kwelikaMthaniya. Abanye esibamemile ngab Comission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. Laba sibamema ngoba siyabona kuningi okungase kuqhathe imiphakathi ebona ukuthi amasiko ayo ayaxhashazwa noma ayajivazwa, kuhle ukuba sikugweme lokho. Namaphoyisa nawo siwalindele kanjalo nenhlangano ye-Independent Electoral Commission, eholwa nguMnumzane uMawethu Mosery.
Ukuqinisekisa ukuthi lesi sigcawu kasibi ngesezinhlaka zikaHulumeni, Indlu YaMakhosi KwaZulu-Natal, iZinduna kanye nezinhlaka ezikhona emahostela nazo zizoba yingxenye ukuba zizochaza ngemikhuba egilwa ikakhulukazi emzini waKwaMashu kanye nowaseGleblelands. Okwamakhosi ezizwe kona kuyoba wukubika ukuthi kulokho engabe ngijube ukuba kwenziwe kokuqinisekisa ukuthula ezindaweni akuzo ngabe sekumi kanjani. Inhlangano iNjeje YamaNguni engiyijube ukuba isebenzisane neSivananda World Peace Foundation bazokwenza isethulo sokuthi yini abayibona iyinkinga nokuthi yini okumele kwenziwe.
Kuso futhi lesi sigcawu seKwaZulu Public Peace Process amaqembu epolitiki ngaphakathi nangaphandle kwale Ndlu kulindeleke ukuthi nawo aphefumule. Kanjalo ngokukhethekile sizomema amanxusa kanye nezinhlangano ezimele labo abavela kwamanye amazwe ngoba kumqoka ukuba nabo njengoba sebeyingxenye nje
yethu babe nenkundla lapho bephawula khona. Ngokwami yisigcawu esiyokwenza singanyanyalati sikhulume lokho okuyizinkinga njengomndeni. Wonke umuntu oza esigcawini uvikelekile ukuba akhombe inkinga kepha okumqoka wukuza nezincomo ezizosiyisa phambi. Lesi sangenyanga ezayo yisiqalo ngoba kuzoba khona izigcawu kulo lonke elikaMthaniya.
Ngiphetha ngokukhipha isimemo engisibhekise esizweni. Lesi yisimemo sokuthi nibe yingxenye yemigubho enhlobonhlobo yokubungaza isenzo sombumbi weSihlalo engihleli kuso, uNoduma ehleli kaMenzi, iLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. Kulo nyaka sibungaza ubuhlakani abenza eminyakeni nje eyishumi nambili yokubusa kwakhe lapho ehlanganisa isizwe, eqeda uMzulu wenza uZulu, waqeda izinhlanga wenza uhlanga. Kuwo futhi lo nyaka sizobe sibonga uMvelinqange ngeminyaka engamashumi amane nane engiphe umusa wokuba ngibe yiNkosi yenu. Imininingwane ngale misebenzi yonke izokhishwa ngesikhathi esifanele kepha njengoba ngishilo nonke niyamenywa.
Ngala mazwi nginifisela ukusebenza okuhle kulo nyaka nikwazi ukuba nobuhlakani bokubuka izinto ngale kweqembu umuntu alimele kepha nicabangele umndeni wonke okuyisizwe sonke saseNingizimu Afrika. Ngiyabonga.